Jean-Max Rakotomamonjy : « Dingana lehibe amin’ny famahana olana ny fanendrena ny PM » -
AccueilSongandinaJean-Max Rakotomamonjy : « Dingana lehibe amin’ny famahana olana ny fanendrena ny PM »
Jean-Max Rakotomamonjy : « Dingana lehibe amin’ny famahana olana ny fanendrena ny PM »
06/06/2018 admintriatra Songandina 0
Araka ny efa fantatra, dia voatendry ny alatsinainy teo ny praiminisitry ny marimaritra iraisaina, Ntsay Christian. Mbola maro ihany anefa ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa, ary samy manana ny heviny mahakasika izany avokoa ny rehetra.
Ho an’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean-Max Rakotomamonjy, dia nanambara ny tenany fa samy tokony hanaiky io praiminisitra vaovao voatendry io ny rehetra. “Eto aho dia miarahaba manokana ny vahoaka malagasy, satria ny nahafahana nanendry ny praiminisitra dia ny marimaritra iraisana, araka ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Anisan’ny dingana iray lehibe amin’ny famahana ny olana ny fanendrena ny praiminisitra vaovao. Tontosa iny izay ny dingana iray lehibe, ary tokony hiteraka firavonana eo amin’ny tsy fitovian-kevitra teto amin’ny firenena izany”, hoy ity laharana voalohan’ny Antenimieram-pirenena ity.
Araka izany, raha ny nambarany hatrany dia tokony hirosoana amin’izay ny filaminana sy ny fitoniana. Ny tanjona mantsy, hoy ihany izy, dia ny hahatongavana amin’ny fifidianana anaty fitoniana ary eken’ny rehetra. “Raha ao anatin’ny fifanenjanana mandrakariva dia tsy hisy fitoniana izany mihitsy eto amin’ny firenena. Rehefa tsy misy ny fitoniana sy filaminana, dia tsy hisy ihany koa ny fampandrosoana. Tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana anefa no tokony himatimatesan’ny rehetra. Izay ilay ady amin’ny fahantrana”, hoy i Jean-Max Rakotomamonjy.
Ankoatra izay, dia notsindrian’ity filohan’ny Antenimieram-pirenena ity fa ny ankolafin-kery politika rehetra eo anivon’ny Antenimieram-pirenena kosa dia tokony ho tazana sy ho hita taratra ao anatin’ilay governemantan’ny marimaritra iraisana.
Tsaratanana : Kidnapping valo
Niova endrika ny asan-dahalo any amin’iny faritr’i Tsaratanàna iny araka ny fanazavana nentin’ny solombavambahoaka voafidy tao Tsaratanàna, Jaona Ratefiarijaona (hita amin’ny sary). Tsy vaky trano na halatr’omby fotsiny intsony no ataon’ireo dahalo any an-toerana fa ...Tohiny
Famotsiam-bolan-dRavatomanga : Mitentina 43 800 000 000 Fmg
Marc Ravalomanana : Hisaotra ny mpifidy eny Ambohijatovo